कम्पनी र व्यावसायिक संदर्भमा निर्भर गर्दै, बिदाको लागि कम या कम गाह्रो हुन सक्छ। यद्यपि, सबै कम्पनीहरूले लिइएको कुनै पनि बिदाको लागि लिखित अनुरोधको आवश्यक पर्दछ: यसैले यो आवश्यक कदम हो। यो राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ! यहाँ केहि सुझावहरू छन्।
छोडि अनुरोध गर्न के गर्न
जब तपाईले इ-मेल द्वारा बिदाको अनुरोध गर्नुहुन्छ, सम्बन्धित अवधिको मिति स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ, कि त्यहाँ कुनै अस्पष्टता छैन। यदि अवधिले आधा दिनहरू समावेश गर्दछ भने, यो स्पष्ट पार्नुहोस् ताकि तपाईंको नियोक्ताले बिहान तपाईंको फिर्ताको लागि प्रतिक्षा नगरून्जेल तपाईं दिउँसो मात्र फर्केर आउनुहुनेछ, उदाहरणका लागि!
तपाईले विनम्र र स्वदेशी रहनु पर्छ, निस्सन्देह, र छोड्नको लागि खुला रहन्छ भने छुट्टीमा एक नाजुक अवधि (telecommuting को संभावना, तपाईलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्ने नियुक्ति ...)।
छोड्न अनुरोध गर्ने के छैन
मिति थोपाईको छाप नदिनुहोस्: याद गर्नुहोस् कि यो एक हो आवेदन छोड्नुहोस्, तपाईंलाई आफ्नो उच्चको प्रमाणीकरण नभएसम्म काम गर्न पाउनेछ।
अर्को समस्या: केवल एक वाक्यको साथ इमेल बनाउनुहोस् वांछित छुट्टीको अवधि मात्र घोषणा गर्नुहोस्। बिदा न्यूनतममा उचित हुनुपर्छ, विशेष गरी यदि यो विशेष बिदा हो जस्तै मातृत्व वा बिरामी बिदा।
यहाँ ईमेलको एउटा नमूना हो जुन तपाइँको फारममा छोड्ने फारमको लागि फारममा रहेको छ, संचारमा रहेको कर्मचारीको उदाहरण लिन्छ।
विषय: भुक्तान गरिएको बिदाको लागि अनुरोध
वर्ष [सन्दर्भ वर्ष] मा [संख्याका दिन] भुक्तानी छुट प्राप्त गर्दै, म [मिति] देखि [मिति] अवधिमा [संख्याको] दिनको छुट्टी लिन चाहन्छु। यो अनुपस्थितिको लागि तयारीमा, म राम्रो गति को बनाए राख्न को लागि [महिना] को महिना को लागि संचार कार्य अनुसूचित अनुसूचित गर्नेछ।
यसकारण म यस अभावको लागि तपाईंको सम्झौताको अनुरोध गर्दछु र दयालु अनुरोध गर्दछु कि तपाईंले आफ्नो लिखित प्रमाणिकरण फर्काउनु हुन्छ।
छोड अनुरोधका लागि ईमेल टेम्प्लेट जुन 27th, 2022Tranquillus
अघिल्लोदावीको लागि ईमेल टेम्पलेट
निम्नअनुपस्थितिलाई औचित्य गर्न इमेल टेम्पलेट
छुट्टिको लागि एक स्वचालित अनुपस्थिति सन्देश तयार गर्नुहोस्
मेलको अन्त्य, विनम्र सूत्रहरू त्याग्न
एक सफल पेशेवर इमेल धेरै मापदण्ड को विषय हो